Manchester Derby: Saddexda Arrimood Oo Go’aamin Doona Kooxda Guuleysanaysa, Meelaha Dagaalka Ugu Adag Ka Iman Doono Iyo Qorsheyaasha Pep & Jose | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Manchester Derby: Saddexda Arrimood Oo Go’aamin Doona Kooxda Guuleysanaysa, Meelaha Dagaalka Ugu Adag Ka Iman Doono Iyo Qorsheyaasha Pep & Jose
Published on November 10, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(11-11-2018) Kulanka ugu weyn toddobaadkan horyaalka waddanka Inigriiska ee Premier League ayaa waxa ku ballansan labada kooxood isku magaalada ah ee Manchester City iyo Manchester United, kuwaas oo kulankooda ugu horreeya xili ciyaareedkan ku kulamaya garoonka Etihad.
City oo hoggaaminaysa horyaalka Premier League oo xili ciyaareedkii horena ay ku guuleysatay ayaa waxay soo dhoweyn doontaa Manchester United oo kaalinta labaad ku dhamaysatay sannadkii hore.
Saadaal kala duwan ayaa laga bixiyey meelaha ay ciyaartan labada kooxood ku kala adkaan doonaan iyo midkooda guushu raaci doonto, balse khubarada ciyaaaruhu waxay intooda badan guusha siiyeen Pep Guardiola oo garoonkeeda ku ciyaaraysa, balse waxa jira meelo ay labada kooxood ku dagaallami doonaan, kuwaas oo midkooda ku gacan sarreeya ay guushu raaci doonto.
Waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa saddex meelood oo dagaalka labada kooxood u badnaan doono, midkooda ku guuleystaana saddexda dhibcood qaadan doono.
Raheem Sterling vs Ashley Young: Shaqo wanaagsan ayuu Ashley Young qabtay intii uu ka ciyaarayey difaaca, masuuliyadda ugu badanna waxay fuushay markii loo xidhay calaamadda kabtanimada oo mar kale gacantiisa bidix ka muuqan doonto marka ay berri iska hor yimaaddaan Manchester City.
Kulankan uma fududaan doono Ashley Young, waxaana uu dagaal la geli doonaa ciyaartoy lagu tilmaamo inuu yahay hormoodka weerarka iyo burburiyaha difaacyahannada ka hor yimaadda Manchester City, waana Raheem Sterling.
Sterling ayaa waqti fiican ku qaadanaya City, waxaanu sii wadaa dhalinta goolasha oo xili ciyaareedkii horena uu 23 jeer goolal dhaliyey dhamaan tartamada. Xili ciyaareedkan hadda socda, waxa uu dhaliyey todoba gool 14 ciyaarood oo uu saftay dhamaan tartamada, balse saamayntiisa kale ayaa ka badan goolashiisa.
Ashley Young iyo Raheem Sterling, midkooda ku gacan sarreeya dagaalkooda halka boos ku dhex maraya, waxay saamayn badan ku yeelan doontaa sida ay noqonayso natiijadu iyo kooxda guusha la hoyan doonta.
Anthony Martial vs Kyle Walker: Difaac iyo weerar iska soo horjeeda, laba orod badan oo tayadoodu sarrayso. Martial oo kulamadii ugu dambeeyey qaab ciyaareed fiican muujiyey ayaa waxa uu ka hor tegi doonaan Kyle Walker oo sannadkii 2017 ay Manchester City lacag badan kaga soo iibsatay Tottenham, waxaana dagaalkooda midka ku gacan sarreeyaa uu ka caawin doonaa kooxdiisa inay dhibcaha ciyaarta qaadato.
Martial oo dhaliyey goolal shantii ciyaarood ee ugu dambaysay, waxa uu mar kale kasoo muuqan doonaa shaxda tababare Mourinho oo uu ka baxay bilowgii hore, orodkiisa iyo xarfaddiisa badana waxa uu u adeegsan doonaa inuu ku jabiyo Walker oo difaaca midig u istaagi doona City, haddii uu ku guuleysto inuu soo dhaafana waxa uu ku dhowaan doonaa goolka oo haddii uu dhaliyo ay si weyn u damaashaadi doonaan jamaahiirta niyad-samidiisa soo celiyey.
Walker ayaa isaguna casharo ka qaatay tababare Pep Guardiola oo u sharraxay siyaabaha uu u qaban karo Martial, waxaanay sii dejiyeen qorshihii ay kaga dhigi lahaayeen maqane jooga.
Ander Herrera vs Bernardo Silva: Loollanka khadka dhexe, khibradda iyo halganka ugu adag – Xiddiga khadka dhexe ee reer Spain ee Herrera oo si wanaagsan u ciyaaray kulankii Champions League ee Juventus ayaa la filayaa inuu kusoo bilowdo shaxda United, haddii ay dhacdana waxay si toos ah iskaga hor iman doonaan Bernardo Silva oo buuxin doona booska uu banneeyey Kevin de Bruyne oo dhaawac ah.
Bernardo oo kaashanaya David Silva waxay noqon doonaan fureyaasha ciyaarta Manchester City, waxaana lugtooda bidixda ee kalsoonida badan ay ku jirto ay isku deyi doonaan inay ku kala daadiyaan dhexda United, balse Herrera oo tamarta ku jirtaa tahay dabiici aan dhamaad lahayn, ayaa waxa uu u xilsaarnaan doonaa qabashada labadan ciyaartoy gaar ahaan Bernardo.
Haddii Bernardo iyo Silva ay gacanta sare yeeshaan, waxay kala daadin doonaan Manchester United oo tababaheeda Jose Mourinho mar kale lagu dhalleecayn doono in aanu iska celin karaynin Pep Guardiola, haddiise Herrera oo gacan ka helaya Matic iyo Pogba ay awoodda sare yeeshaan, waxa 90-ka daqiiqadood ee ciyaarta ay United ku qaadan doontaa iyadoo niyadda ku haysa guusha, balse City ayaa markaas kubaddeeda baaska ku dhisan ka keeni karta dhinacyada.
Si kastaba ha ahaatee, saddexdan meelood ayaa la filayaa in dagaalka ugu adag ee labada kooxood uu ka dhaco, macallimiinta khibradda badan ee Pep Guardiola iyo Jose Mourinho na ay sii qorsheeyaan sida ay uu midba midka kale u jabinayo.